Igumbi lokulala eliphindwe kabili kanye negumbi lokugezela ku-villa. - I-Airbnb
Igumbi lokulala eliphindwe kabili kanye negumbi lokugezela ku-villa.
Coppito, Abruzzo, i-Italy
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Enrico
U-Enrico Ungumbungazi ovelele
Ukuzola kwendlu egxilile epaki elincane, elihle kakhulu lokufunda, ukuphumula, ukuvuselela. Futhi ifanele labo abafunda insimbi yomculo. Ikhishi labelwe abanikazi, ogogo nomkhulu ababili abathule abathanda ukudla okumnandi.
Igumbi linephasishi elinegumbi lokugezela elizimele, isiqandisi salo, ikhabethe lokubeka impahla kanye nendawo yokubeka izicathulo. Ingahlalisa abantu ababili noma umbhangqwana (imibhede ihlangana ndawonye ukwenza kabili). Ingasetshenziswa futhi ngumuntu oyedwa. Izivakashi zingasebenzisa ingadi kanye nethala ngendlela ezithanda ngayo, okwabelwana ngazo nabanikazi bendlu.
ubusuku obungu-7 e- Coppito
Singaluleka izivakashi ngokuvakasha kwamadolobha nezindawo zokuzipholela. Indawo yakhiwe izindlu ngazinye futhi i-villa itholakala emngceleni nepaki yangasese enkulu kakhulu. Okuluhlaza kanye nokuthula kuyilungelo eliyinhloko, nokho kuyisifunda namuhla esithathwa njengesizinda kakhulu kuzo zonke izinkonzo.
Abanikazi bahlala isikhathi esiningi sosuku endlini ngakho-ke cishe bahlala betholakala kunoma yisiphi isidingo.
UEnrico Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Coppito namaphethelo